Igwe anaghị agba nchara Bandings Manufacturers na Suppliers | China igwe anaghị agba nchara Bandings Factory
Banding ma ọ bụ strapping ngwaahịa na ngwa e mepụtara na ukwu ihe ọnụ, itinye ulo oru oyiyi akwa na okporo osisi ya. Banding usoro bụ a set nke kpọgide ihe na pụrụ iche gwara ngwaọrụ mere nke igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ígwè, kpuchie na pụrụ iche ihe, gas, mmanụ na Ngwuputa ụlọ ọrụ, gwara ịrịba ama iji ike akara.
N'ihi uru dị ka akp ọrụ ndụ; nnọọ mfe na-adaba adaba na ojiji, na ntukwasi-obi na tightly attaching, strapping ngwa nwere ike etinyere nnọọ n'ọtụtụ ebe: ke eletriki kpọgide ngwọta, na-ewu nke eletriki nkesa e: ala voltaji na elu voltaji ABC edoghi, efefe nnyefe edoghi, Telecommunication edoghi, ewu nke n'èzí n'ezinụlọ optic netwọk, n'okporo ámá ma ọ bụ okporo ụzọ ihe ịrịba ama na video ese foto, akpa na ndị ọzọ na osisi ngwaike, mmiri na ụgbọ okporo ígwè eme njem.
N'ihi ex., Ndị bụ isi na ngwugwu nke banding ngwa ka fixate ndị LV-ABC ngwa ka osisi na-agụnye:
* The ngwá ọrụ tightening gbalaga
* buckles ma ọ bụ mkpachị
haziri nke banding mkpachị na buckles ewepu zuo bolts, akụ na washers, mkpịsị ugodi nke dị iche iche nha.
Nwụnye bụ nnọọ mfe
* Bee anaghị agba nchara eriri na mkpa ogologo site eriri banding ngwá ọrụ
* Idozi eriri site na-akpụ akpụ eriri banding ngwá ọrụ wheel (ma ọ bụ ratchet), mgbe ahụ, bee gbalaga.
Steel strapping bụ ike n'ụzọ nke ichebe na ibu, mgbe gwara ihe ghara elu ike ọdụdọ. Jera 'banding na ngwaahịa ndị dị na iche iche nha aka gị strapping mkpa.
Ntekwasa igwe anaghị agba nchara USB Ties